Mavericks OS hore u ordaya on 40 boqolkiiba Apple Macs - Rule News
Mavericks OS hore u ordaya on 40 boqolkiiba Apple Macs
Apple ee OS X Mavericks nidaamka qalliinka (THE) hadda waddaa on 40 boqolkiiba Macs, warbixin ka network xayeysiis online dalka Jubuuti ayaa sheegay.
Shirkadda eegay tobanaan malaayiin dareenkaa u ad-ku-saleysan X OS ay network dhexeeya 17 March iyo 23 March in ay soo gaarnay in, isagoo sheegay in dhammaan qoraalkii la heli karo Apple ee Mac software, oo ay ku jiraan versions ka weyn sida Mac OS X 10.8 Mountain Libaaxa iyo Mac OS X 10.7 Libaaxa, 40 boqolkiiba gaadiidka web ka Mac OS X yimid 10.9 Mavericks.
Apple Mavericks ansixiyay 40 boqolkiiba dhammaan dadka isticmaala Mac
Apple sii daayay ay Mac OS X 10.9 Mavericks OS bilood kaliya shan ka hor iyo yaabay users by taas oo laga heli karo sida a free download. Waxay u badan tahay in la'aanta ah ee tag qiimo mas'uul ka yahay ay ku guulaystaan ​​waqti gaaban sida a.
By la barbardhigo, tirada ugu badan ee dadka isticmaala Windows waa la ordaya versions jirka. Sida laga soo xigtay February 2014 stats ka Codsiyada Net, oo keliya 11 boqolkiiba mashiinada la OS Microsoft waxaa la socda Windows 8, la 47 boqolkiiba dadka isticmaala Windows doorbidayey 7 oo shir sanadeedkii a 30 boqolkiiba dhagno Windows XP, oo wuxuu ku saabsan yahay si ay u noqdaan aqlka.
Microsoft ayaa isku dayay kala duwan oo ka mid ah tricks in uu ku qanciyo dadka isticmaala XP in ay kor u version cusub Windows, oo ay ku jiraan digniin ah cawaaqib xun ammaanka ee dusin nidaamka 12-sano jir ah iyo qurbaan dhimis on hardware cusub Windows. Waxaa laga yaabaa in samaynta OS xorta ah kor sida Apple sameeyey, waa tabtii dheeraad ah macquul.
Apple ayaa sidoo kale la sii daayay ah Mac OS X 10.9.1 cusboonaysiiso ee December, laakiin in ku guuldareysatay inay wax aad u xiiso badan samatabbixin, sida u bixiyey inta badan la rajeenayo in cayayaanka iyo faaidaysan yar.
Mac OS X 10.9.1 keenay “taageero hagaagay for Gmail in OS X Mail, oo la rajeenayo in isticmaalayaasha la caadadii goobaha Gmail” iyo sidoo kale horumarinta isku halaynta ee Smart jiidho iyo baadhaan in Mail.
update Mavericks ayaa sidoo kale go'an dhibaato in Voiceover joojiyay ka reading baxay xukuntay in ku jira emoji. rajeenayo in kale waxaa ka mid updates in iLife iyo iWork ah barnaamijyadooda si ay u cusboonaysiiyaan lahaa nidaamka non-Ingiriisi, iyo xal arrinta ah in magaca kooxda Contact a ka populating beerta cinwaanka looga hortegi waayo,. m
article Tani, waxaa syndicated ka weyddiista oo waxaa halkan fasax posted.
20461	0 Mac, Macintosh, Maverick, Nidaamka Operating, OS X
← lamaane Gay guursadaan markii ugu horeysay ee England iyo Wales Zuckerberg shaqeeya on drones WiFi meelaha fog fog →